HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး54 Sakaryaအဆိုပါကန်ထရိုက်အလုပ်သမားများလုပ်ခ Huzursuzug Continues TÜVASAŞ
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Tüvasas, တူရကီ 0
အဆိုပါကန်ထရိုက်ရဲ့ကြေးအတွက်လုပ်သားများအကြားTÜVASAŞ suruyor huzursuzug ဖြစ်ပါသည်
သူတို့ကိုတိုးတက်မှုပေးခြင်းအားဖြင့်အေဂျင်စီ UNHCR လုပ်သားတွေရဲ့လစာစတင်ပိုပြီးမငြိမ်သက်မှု၏TÜVASAŞအနိမ့်လစာဖြတ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုသင့်လျော်သောများ၏လျှောက်လွှာကိုငြင်းဆိုခဲ့သည်။ အလုပျသမားရှာသောအခါယင်းကိုးကွယ်ရာအကြားတင်းမာမှုများစတင်
13 DIFFERENT စွဲချက်
TÜVASAŞခုနှစ်တွင်နှစ်သစ်မတိုင်မီအေဂျင်စီလုပ်သားများအကြား polemic တာဝန်ခံကြုံနေရသည်။ ကြောင့်ဆက်လက်မငြိမ်မသက်နီးစပ်သည့် 400 13 ကွဲပြားခြားနားသောလစာအချိန်ဇယားကိုမှတည်ရှိပြီးစက်ရုံမှာနှုံးလုပ်သားများန်ထမ်းအကြားစတင်ခဲ့သည်။ နီးစပ်သည့် 20 ရာခိုင်နှုန်း xnumx'y ဧရိယာနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခထက်ပိုဝန်ထမ်းများ, လယ်ပြင်န်ထမ်းလျှော့ချမှုလုပ်များနှင့်သူတို့ကိုပေးချင်ခဲ့တယ်ထံမှ 150 40 ရာခိုင်နှုန်းကဒါစက်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ဤသည်ဝယ်လိုအားန်ထမ်းအကြားတစ်ဦးအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အနိမျ့လုပ်ခဘာသာရပ်ဒေသများ AKP ပြည်နယ်ကိုသမ္မတယူနွတ် Tevere မော်တော်ယာဉ်။ စက်ရုံ၏အပိုဆောင်းအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဖို့လျှောက်လွှာကိုလည်းပယ်ချခံခဲ့ရသည်။ မီးရထားစီးပွားရေးဌာနခွဲကသမ္မတ Cemal Yaman ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအလုပျသမားမြားနှငျ့တှေ့ဆုံခဲ့သညျ။ အစည်းအဝေးလည်းတက်ရောက်ခဲ့သည်နှင့်မငြိမ်သက်မှုများဆက်လက်ကြောင့်သင်ယူခဲ့သည့်တစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထွက်ခွာTÜVASAŞဒုတိယသမ္မတသည်ယာကုပ်ကို Karabakh ။ (Sakaryayenihab ဖြစ်ပါသည်)
စိတ်လှုပ်ရှားမျှော်လင့်လုပ်သားများအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကျုံ့ဆက်လက် 23 / 09 / 2014 စိတ်လှုပ်ရှားမျှော်လင့်လုပ်သားများအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကျုံ့ဆက်လက်: အသုံးအများဆုံးaşeroအလုပ်သမားကဏ္ဍ, 417 318 တထောင်ကလူတထောင်လူတို့နှင့်အတူသန့်ရှင်းရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ စိတ်လှုပ်ရှားမျှော်လင့်၏ဤအသိတစ်အိတ်အတူပါလာလတံ့သောအေဂျင်စီလုပ်သားများတရားသစ်ကိုစည်းမျဉ်းများ, ကြာ ... ကိစ္စ Faruk Celik ရဲ့အဖွဲ့အပေါ်ဥပဒေကြမ်းအောက်တိုဘာလအတွက်ညီလာခံရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်သားများမှမျှော်လင့်ခဲ့သည်မှဆောင်ခဲ့ဦးမည်လို့ပြောပါတယ်။ ညာဖက်က၎င်း၏ဝန်ထမ်းများ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရရှိရန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ဖို့အလုပ်သမားများအမှု။ အသံဖော်ပြချက်အများပြည်သူကဏ္ဍသံမဏိအတွက်စာချုပ်လုပ်သားများနှင့် ပတ်သက်. ဆောင်ခဲ့လေ၏။ ဒါဟာအများပြည်သူကဏ္ဍန်ထမ်းများအတွက် 600 တထောင်ကန်ထရိုက်အကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားမျှော်လင့်အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ သာလမ်းများပေါ်တွင် ...
izban ကန်ထရိုက်အတွက်ကုမ္ပဏီအကြွေးအလုပ်သမားများ Left, run ခဲ့သည် 14 / 04 / 2018 အကောင့်ထဲမှာလဲလျောင်းပိုက်ဆံနှင့်အတူရောနှောသည့်အခါ izban ကန်ထရိုက်အတွက်အလုပ်သန့်ရှင်းရေးထွက်တင်ဆောင်လာသော 200 ဆုံးရှုံးမှုနီးစပ်သူတို့၏လစာမခံမယူခဲ့ပါဘူး။ အတူတကွန်ထမ်းစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူအစိုးရ, စကားများ '' ကျနော်တို့အများပြည်သူအတွက်ကန်ထရိုက်ကိုလက်စသတ် '' နောက်တစ်ကြိမ်အမှန်တရားရောင်ပြန်ဟပ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထားနှင့်ဝန်ထမ်းİzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့မိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဆိုပါဖယ်ထုတ်လိုက်၏အတိုင်းအတာန့ ်. နှင့်ကုမ္ပဏီအလုပ်သမားသားကောင်များနှုံးခဲ့သန့်ရှင်းရေး izban 200 အတွက်လျှောက်လွှာငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ subcontracting ကုမ္ပဏီများမှတဆင့်တင်ဒါနောက်ဆုံးသန့်ရှင်းရေးအလုပ်အကိုင်များကိုညွှန်ကြား Germiyan မြို့လုပ်သားတွေရဲ့လစာပျောက်ကွယ်သွားနှင့်အတူအလယ်၌တည်ရှိ၏သည်။ ကုမ္ပဏီအကောင့်ထဲမှာအလုပျသမားမြား၏လစာ၏သတင်းအချက်အလက်များအရရက်သတ္တပတ်İZBANစီမံခန့်ခွဲမှုနှုန်း ...
မီးရထားအလုပ်သမားများစောငျ့န်ထမ်းများ၏ကန်ထရိုက် 10 / 12 / 2018 CHP Nigde လက်ထောက်ဖြစ်သူ Omar Fathi Gürerသည်လည်ပတ်နေသောကော်မရှင်အစည်းအဝေး၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးရန်, လှံတံဟာကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပြဿနာများဆောင်ခဲ့လေ၏။ ကြောင်းစာချုပ်အလုပ်သမားများကိုနေဆဲကစားသမားအိုမာ Fathi Gürerမှဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်ဖျော, အင်ဂျင်နီယာ၏ status အတွက်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများနှင့်ဝန်ထမ်းများသည်လည်းအလုပ်သမားအရပ်ဘက်ကျွန်သည် status ကိုကူးမြောက်သင့်ကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ TCDD ဘာကြောင့်လှံတံကိုလည်းအတွက်ကန်ထရိုက်? ရီပတ်ဘလီကန်ပြည်သူ့ပါတီ (CHP), Nigde လက်ထောက်ဖြစ်သူ Omar Fathi Gürer, အစိုးရပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (လည်ပတ်သော) ကိုကော်မရှင်အစည်းအဝေးတွင်, ပြည်နယ်မီးရထားအထွေထွေညွှန်ကြားမှုကန်ထရိုက်များ၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအကောင်အထည်ဖော်ရေးအာရုံစိုက်ဆွဲငင်။ အလုပ်လုပ်လုပ်သားများနှုံးGürerခြောက်သွေ့ပိုင်ကုမ္ပဏီများညွှန်ပြမျိုးစုံကုမ္ပဏီများမှ TCDD များ၏တစ်ရှူးများတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပြုပြင်မွမ်းမံ ...
အဆိုပါအဝေးပြေးအေဂျင်စီလုပ်သားများကိုစစ်တိုက်ခြင်းမှအလုပ်သမား subcontract 14 / 07 / 2014 subcontract အမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်အဝေးပြေးအေဂျင်စီလုပ်သားများကိုစစ်တိုက်ခြင်းမှ: အဝေးပြေး၏ 2010 ခုနှစ်တွင်ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ, တထောင်9အကြောင်းကိုလုပ်သားများ subcontracted အတွက်ရှိခဲ့သည်။ အလုပျသမား, အထွေထွေအလုပ်အဝေးပြေးအစီအစဉ်၏ညွှန်ကြားမှု, အလုပ်စည်းကမ်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိရိယာများနှင့်အဆင့်ဆင့်နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ လမ်းမကြီး-စီးပွားရေးဒါရိုက်တာအသင်းမှဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ကျွမ်းကျင်သူဝန်ထမ်းနှင့်အတူဘုတ်အဖွဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများလကြာချိန်အားဖြင့် collusion သောခံယူချက်ကယူဆောင်အခြေအနေကအလွန်စေ့စပ်အလုပ်, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး "စာချုပ်အလုပျသမား" ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းအလုပျသမားမြား၏ 17 နှင့်အတူသီးခြားအစည်းအဝေးများအပြီးတွင်စတင်ခဲ့သည်။ ဖိအားစတင်ခဲ့သည့်အခါအသင်းဝင်စတင်သည်။ လမ်းမကြီး-စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှအဖွဲ့ဝင်များ, "အလုံးစုံတို့အဘို့တစ်ခုမှာကြှနျုပျတို့အားလုံးကိုတဦးတည်း" ဟုဂျက်ပုံနှိပ်ခြင်း၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်တိုင်းအဆင့်မှာထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူပြီးမှလမ်းမကြီး-စီးပွားရေးအသင်း ... ။
ယင်းစောင့်ဆိုင်းန်ထမ်းများအတွက်အလုပ်လုပ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအေဂျင်စီလုပ်သားများ 20 / 08 / 2014 ဝန်ထမ်းများစောင့်ဆိုင်းနေသည့်လမ်းများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အေဂျင်စီအလုပ်သမားများကို: ယင်း၏န်ထမ်းများနှင့်စာချုပ်အလုပျသမားအနေဖြင့်လမ်းမကြီးအလုပ်သမားများကိုတရားစီရင်ရာဝန်ထမ်းများအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဘို့တာဝန်ပေးအပ်ခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေ, စဉ်ဆက်မပြတ် Yural လမ်းထဲမှာရှိပါတယ် "လမ်းအလုပ်သမားများကို Yural ၏ခက်," န်ထမ်းများနှင့်စာချုပ်အလုပ်သမားလမ်းများပေါ်တွင်ဖြစ်ကြသည်စီရင်တော်မူခြင်းလျှောက်ထားန်ထမ်းများအတွက်တာဝန်ပေးအပ်ခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေ "ဟု၎င်းကပြောသည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး Cizre 95 ။ ဘဏ်ခွဲအန်ထမ်းများနှင့်ဘဏ္ဍာရေးများ၏ဦးစီးချုပ်၏ဝန်ထမ်းများပြည်ထောင်စု Yol-62 စာချုပ်လုပ်သားများနှင့်အတူဆိုင်းငံ့န်ထမ်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များက၎င်းတို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆို။ အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက် Yural Read, ထိုကဲ့သို့သောကန်ထရိုက်တာများအဖြစ်အလုပျသမားမြား၏ကဏ္ဍအားလုံးတွင်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအေဂျင်စီအလုပ်သမားများ, ကျွန်အဖြစ်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ကြ, သူတို့ကပြဿနာတွေနဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုအများကြီးဘဝအလုပ်လုပ်, လုံခြုံတဲ့söyledi.yuralအလုပ်လုပ်ချင် ...
izban ကန်ထရိုက်အတွက်ကုမ္ပဏီအကြွေးအလုပ်သမားများ Left, run ခဲ့သည်
လမ်းများပေါ်တွင်စာချုပ်လုပ်သားများတင်ပါတယ် 1.050 မတွေ့ TL ဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့တာ
TCDD xnumx'üncန်ထမ်းများနှင့်စာချုပ်အလုပ်သမားများကိုပိုက်လိုင်း၌ရှိကြ၏, သူတို့ကပိုက်ဆံမရနိုငျ